နိုင်ငံအတွင်း အထည်ချုပ် စက်ရုံပေါင်း ၄ဝဝ ကျော်ရှိ၊ ပြည်နယ်နှင့် တိုင်းဒေသကြီး အချို့တွင် အ? - Yangon Media Group
နိုင်ငံအတွင်း အထည်ချုပ် စက်ရုံပေါင်း ၄ဝဝ ကျော်ရှိ၊ ပြည်နယ်နှင့် တိုင်းဒေသကြီး အချို့တွင် အ?
ရန်ကုန်၊ ဇွန် ၂ဝ
မြန်မာနိုင်ငံ၏ အမျိုးသားပို့ကုန် မဟာဗျူဟာကြီး ၁၁ ရပ်တွင် တစ်ခုအပါအဝင်ဖြစ်သည့် အထည်အလိပ်ကဏ္ဍပို့ကုန် တန်ဖိုးတွင် အမြင့်ဆုံးရောက်ရှိနေသဖြင့် ပိုမိုဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် အထည်ချုပ်စက်မှုဇုန်များ တည်ထောင်သွားမည်ဖြစ်ကြောင်း စက်မှုဝန်ကြီးဌာန ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဦးခင် မောင်ချိုက ပြောသည်။
ဇွန် ၂ဝ ရက် ပြည်သူ့လွှတ် တော် အစည်းအဝေးတွင် လှိုင်မြို့ နယ် ပြည်သူ့လွှတ်ကိုယ်စားလှယ် ဦးအောင်ကျော်ကျော်ဦး၏ အထည်လိပ်စက်မှုဇုန်များတည်ထောင် ပေးရန် ရှိ၊ မရှိ မေးခွန်းနှင့် ပတ်သက် ပြီး ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးက ယင်း ကဲ့သို့ဖြေကြားခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။ ကချင်၊ ရခိုင်ပြည်နယ်နှင့် တနင်္သာရီ၊ ဧရာဝတီနှင့် ရန်ကုန် တိုင်းဒေသကြီးတို့တွင် အထည်ချုပ် စက်မှုဇုန်များ တည်ထောင်သွား မည်ဖြစ်ကြောင်း၊ ဧရာဝတီတိုင်း ဒေသကြီးတွင် အထည်ချုပ်စက်ရုံ အသစ် ၃၅ ရုံ တည်ဆောက်ရန် လျာထားကာ ၂၁ ရုံ ပြီးစီးပြီဖြစ် ကြောင်း ဝန်ကြီးက ဆိုသည်။
လက်ရှိ မြန်မာနိုင်ငံတွင်အထည်ချုပ်စက်ရုံပေါင်း ၄ဝဝ ကျော် ရှိကြောင်း၊ ပြည်ပပို့ကုန်အနေနှင့် လက်ခစားစနစ်ဖြင့် ပို့ကုန်တင်ပို့ မှုမှာ ၂ဝ၁၂-၁၃ ခုနှစ်တွင် တစ်ဘီလီယံရှိရာမှ ၂ဝ၁၇-၁၈တွင် အမေရိကန် ဒေါ်လာ သုံးဘီလီယံ အထိရရှိခဲ့သဖြင့် ငါးနှစ်အတွင်း ပို့ကုန် သုံးဆတိုးမြင့်လာခဲ့ကြောင်း၊ ၂ဝ၁၈ ခုနှစ် ဧပြီလမှ မေလ နှစ်လအတွင်း ပို့ကုန်တန်ဖိုး ၂ ဒသမ ၄ ဘီလီယံ ရှိရာတွင် လက်ခစား စနစ်ဖြင့်ချုပ်ပြီး အထည်တင်ပို့မှု ၅၃၈ သန်းရှိသဖြင့် လက်ရှိပို့ကုန်တန်ဖိုး၏ အမြင့်ဆုံးနေရာသို့ ရောက်ရှိနေကြောင်း၊ ၂ဝ၁၆- ၂ဝ၁၇ ခုနှစ်တွင် မြန်မာလုပ်သား သုံးသိန်း ရှစ်သောင်းကို အလုပ်အကိုင် ဖန်တီးပေးနိုင်ပြီး ၂ဝ၂၅ ခုနှစ်တွင် စက်ရုံ ၁၅ဝဝနှင့် အလုပ် သမားတစ်သန်းခန့်တိုးမြှင့်လာမည် ဟု ခန့်မှန်းထားကြောင်း သိရသည်။
လှိုင်မဲဆန္ဒနယ် ပြည်သူ့လွှတ် တော်ကိုယ်စားလှယ် ဦးအောင်ကျော် ကျော်ဦးက ”အထည်အလိပ်လုပ်ငန်းဟာ အရင်းအနှီးနဲ့ နည်းပညာလိုအပ်ချက်နည်းပါးပြီး လုပ်သား အင်အားအခြေပြုရလို့ ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံရဲ့ အခြေအနေနဲ့ ကိုက်ညီပါတယ်၊ အာရှမှာ မြန်မာနိုင်ငံဟာ ဘင်္ဂလားဒေ့ရ်ှပြီးရင် လုပ်သား ဈေးအချိုဆုံးဖြစ်ပါတယ်၊ အမှန်တကယ် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမူတွေသာ ဝင်ရောက်လာရင် ပို့ကုန်တန်ဖိုး ဘီလီယံ ၂ဝ အထိတိုးတက်လာနိုင်ပြီး ယင်းပမာဏကွီဏရဲ့ သုံးပုံ တစ်ပုံလောက်ရှိလာနိုင်ပါတယ်” ဟု ပြောသည်။
အင်းစိန် ဗဟိုအကျဉ်း ထောင်တွင် တက္ကသိုလ်ဝင်တန်း တက်ရောက်နေသူ ၄ဝ ကျော်ရှိ
ယူအီးအက်ဖ်အေ၏ စုံစမ်းစစ်ဆေးမှုကို ကြိုဆိုကြောင်း ဂွါဒီယိုလာပြောဆို၊ ပွဲတိုင်းတွင် ဂိုးပြတ?
ကလေး၊ ချင်းတောင်ဒေသ၌ နှစ်တိုင်းထက် အအေးပေါ့သဖြင့် ဘေထုပ်ထည်များ အရောင်းအဝယ် ကျဆင်းကာ အရှုံ??
ဂေးလ်အဖွဲ့ဟုဆိုကာ ရုရှားတွင် BTS အဖွဲ့၏ ရုပ်ရှင်ပြသမည့် အစီအစဉ်ကို ဖျက်သိမ်း
ကဗျာဆရာ ကြည်အောင် ကွယ်လွန်ခြင်း (၉)နှစ်ပြည့် အောက်မေ့ဖွယ် အမှတ်တရ အခမ်းအနား ကျင်းပ